Aqoonyahankii Farsameeyey Nuclearka Pakistaan Oo Geeriyooday. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Aqoonyahankii Farsameeyey Nuclearka Pakistaan Oo Geeriyooday.
On Oct 11, 2021 112 0
Dalka Pakistaan, wararka ka imaanaya waxay tilmaamayaan inuu geeriyooday ninkii aas-aasay nuclearka dalka Pakistaan ee lagu magacaabo Cabdil Qadiir Khaan.
Telefeshin dowladeed oo ku yaala dalka Pakistaan ayaa tilmaamay geerida injineerkii guud ee farsameeyey hubka nuclearka ee dalka Pakistaan, kadib xanuuno soo wajahay oo kaga dhacay dhanka sambabada.
Isbitaal loola cararay markii uu xanuunka soo ritay ayuu ku geeriyooday Cabdil Qadiir oo da’ ahaan ku dhintay 85 sano.
Waxaa ninkan oo aqoon durugsan u lahaa culuumta maadiga lagu tiriyaa ninkii ugu horeeyay oo ku guuleysta inuu farsameeyo bam nuclear ah, kana soo jeeda wadan muslim ah kaasoo ah dalka Pakistaan.
1936-dii miilaadiyada ayuu ku dhashey magaalada Buubaal oo hadda katirsan Hindiya, xilligas oo uu Ingiriisku gumeysi ku heystay wadamada Pakistaan iyo Hindiya islamarkaana isku ahaayeen hal wadan.
1960-kii wuxuu ninkan ka qelin jebiyay jaamacada weyn ee magaalada Karaji, kadibna wuxuu u safray qaar kamid ah wadamada reer galbeedka oo ugu dambeyn kusoo qaatay shaahadada PHD culuumta la xiriirta macdanta.
1974-tii markii dowladda Hindiya qarxisay bamkii ugu horeeyay oo Nucelar ah, ayuu Cabdil Qadiir khaan wuxuu farriin usoo diray ra’iisul wasaarihii Pakistaan ninka lagu magacaabo Dul Faqaar, wuxuuna usoo jeediyay iney Pakistaan la gudboontahay iney hesho Nucelar si ay usii ahaato dowlad madax banaan.
Ra’iisul wasaaraha Pakistaan ayaa ninkan ugu yeeray booqasho uu ku yimaado dalka, toban maalmood kadib fariintaas uu diray, waxaana ugu dambeyn loo dhiibay mashruuca sameynt nuclear ay yeelato dalka Pakistaan.
6 sano oo xiriir ah oo uu dadaallo ballaaran ku bixiyay mashruuca Nucelarka wuxuu ku guuleystay Cabdil Qadiir inuu soo saaro madaxyo nuclear ah oo dowladaha caalamka ay ku qaadatay farsameyntooda 20 sano iyo ka badan, waxaana uu ahaa nin aad ugu maman howshaas, aqoon durugsanna u lahaa.
Mid kamid ah maqaalaad uu qoray oo uu kaga waramayo sida ay ugu suuragashey farsameynta nuclearka, iyadoo weliba aan laga warqabin wuxuu sheegay iney ahayd iyagoo ku dadaalay qarinta mashruuca, isaguna uu si joogta ah u kormeerayay howsha, waxaana warshada uu ka dhisay mandiqad u dhow magaalada Pakistaan, balse aaney imaaneynin dadka shisheyaha ee dalxiiska u yimaada Pakistaan.
” Mashruuca sameynta Nuclearka Pakistaan kama qarsoomi lahayn indhaha reer galbeedka, haddii aaney jirin lahayn cinaayada Allaah, intaas kadib dadaalka ay dowladda ku bixisay in la sugo howshan caalamka oo idil ay ka garanayaan 5 dal oo keliya” ayuu Cabdil Qadiir Khaan ku yiri mid kamid ah maqaalaadka uu qoray.